सौतेनी हजुरवुवाले ११ वर्षकी बालिकालाई गर्भवती बनाए, पूरै देशमा बबाल – My Blog
No Comments on सौतेनी हजुरवुवाले ११ वर्षकी बालिकालाई गर्भवती बनाए, पूरै देशमा बबाल
काठमाडौं। सौतेनी हजुरवुवाका कारण गर्भवती भएकी एक ११ वर्षकी बालिकाले गर्भ पतन गराउने विषयमा अहिले देशभर बबाल भएको छ । यो घटना दक्षिण अमेरिकी देश बोलिभियामा भएको हो । मानव अधिकार कार्यकर्ताहरुले उनको गर्भपतन गराउनुपर्ने कुराको समर्थन गरेका छन् भने केही धार्मिक संगठनहरुले यसको विरोध गरेका छन् । जसका कारण पुरै देशमा बबाल भएको छ । धार्मिक संगठनले बालिकाको आमा र अभिभावकलाई समेत आफ्नो कुरामा समर्थन गर्ने बनाएका छन् ।
डेलीमेलको एक रिपोर्टअनुसार सौतेनी हजुरबुवाले ११ वर्षकी बालिकालाई गर्भवती बनाएका थिए । हजुरबुवालाई जेल पठाइयो तर बालिकाका विषयमा भने देशभर बबाल भएको हो । एकतिर मानवअधिकार संगठनले बालिकाको गर्भपतन गराउने सल्लाह दिइरहेका छन् भने क्याथोलिक चर्च र धार्मिक संगठन यसको विरोधमा छन् । यो विवादले अहिले त्यहाँ तीब्र बहस सुरु भएको छ ।
यो घटनामा क्याथोलिक चर्चको हस्तक्षेपमाथि गम्भीर रुपमा प्रश्न उठाइएका छन् । धार्मिक समूहहरुले पी डि तकी आमासँग कुरा गरेको र उनलाई पनि विरोध गर्न राजी बनाएको दावी गरिएको छ । तर, मानवअधिकार संगठन र गर्भपतन सम्बन्धी कानुनका कारण पी डि तको परिवारले आफ्नो फैसला बदलेका छन् ।
बोलिभियाकी मानव अधिकार कार्यकर्ता एन पाओला गार्सियाले भनिन् ‘बालिकालाई यो पनि थाहा थिएन कि गर्भवती हुनु भनेको के हो ? उनले आफ्ना काकातर्फका दाइलाई आफूले पेटभित्र केही हल्लिरहेको महसुस गरेको बताएकी थिइन् । दाजुले आमालाई बताएपछि आमाले पुलिसलाई सूचना दिएकी थिइन् ।’ बोलिभियामा आम रुपमा गर्भपतन अ वै ध छ तर यस्ता घटनामा परेका, जन्मजात विकृति वा आमाको ज्या न खत रा मा भएको अवस्थामा भने गर्भपतन गराउन पाइन्छ ।
← कैलालीमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा एक जनाको मृत्यु, ३ जना घाइतेको अबस्था कस्तो छ ? → छठ मनाउन मामाघर आएका दाजुभाईलाई खोलाले बगायो, दाईको मृत्यु भाई बेपत्ता